Ebe nrụọrụ weebụ gị a gwụsịrị na-eduga mmadụ | Martech Zone
TMI = Ọtụtụ Ozi.
Ejiri TMI wuo ọtụtụ weebụsaịtị. M dị njikere nzọ na e nwere 5 n'elu ebe onye ọ bụla na-achọ na a ahụkarị website na mgbakwunye na homepage ụbọchị:
Nbudata (ọ bụrụ na ị nye ha)
Njikọ na Blogs na Social Media Connections
Mụ na ndị ahịa ole na ole na-arụ ọrụ na nso nso a ma na-agbanyeghachi na olu nke ozi ha nwere na weebụsaịtị ha. Enyi na onye ọrụ ibe, Kyle Lacy, dere n'oge na-adịbeghị anya mma, ọrụ na nka ọnweghị ihe ọ mere. Okwuru eziokwu - ọkachasị na websaịtị.
You n’ezie na-atụ anya ka mmadụ kpọsaa ihe dị iche? Ikekwe “Oh ee, anyị bụ ndị ọkachamara na-arụ ezi ọrụ na ndị ahịa anyị… ma anyị àgwà a bit kọrọ. Njikere ịbanye anyị? ”
Akọwaala m websaịtị mgbe niile dị ka akara aka n’ihu ụlọ ahịa gị. Okwesiri ka a hazie ya nke ọma, nkenke, ma doo anya na… na-ekwe ka ndị na-akwụsị gị mara ihe ị na-eme. Ọ dịkwa mkpa ịnọ na nnukwu ebe (SEO), mana nke ahụ bụ post blog ọzọ. Ọ bụrụ nrịba ama dị na mpụga ụlọ ahịa gị nwere kọlụm 25 nke ngwaahịa na ọrụ niile ha nyere, ị ga-agụ ha ma banye? Ma ọ bụ ị ga-apụ?
Ohere inweta bụ, na weebụsaịtị buru ibu, ị na-emezigharị nnukwu ndu na-enweghị ohere ịnweta ha. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkọwapụta atụmatụ na onyinye gị, nke ahụ bụ ohere dị egwu maka blọọgụ. Ma ọ bụghị ya, debe ebe nrụọrụ weebụ gị (aka webign), dị ọcha ma ruo n'ókè. M na mgbe arahụ a 100 peeji nke mkpokọta wee sị, “Chaị, nke a bụ nke ọma na incredibly e!”. Kama, enwere ike m furu efu… ahụghị ihe m na-achọ… wee pụọ.
Banye na nchịkọta weebụ gị ma gụọ ọnụ ọgụgụ peeji nke nwere ọtụtụ nleta na-eche maka 95% nke ụlọ ọrụ gị. O nwere ike iju gị anya (na iwe iwe maka ọrụ niile ị rụrụ na ibe ndị ahụ). Ọbụna blog a, nwere ihe karịrị 2,100 posts… 10 peeji nke akaụntụ 95% nke okporo ụzọ (na ibe ịkpọtụrụ is Otu n'ime ha!). Ebe nrụọrụ weebụ gị kwesịrị ịnye foto doro anya karị. Ole n'ime peeji ndị ahụ nwere ọnụego nkwalite 100%? Ole n’ime ha enweghi nleta efu?
Ndị ahịa m ghọtara, ma na-erite uru ugbu a na atụmatụ a. Otu onye ahịa ugbu a nwere nbanye ndị ahịa nwere ọtụtụ ozi ndị ọzọ site na usoro nhọrọ - mana naanị otu ndị ahịa batara. Onye nke ọzọ nwere blọọgụ ebe ha ga-etinye ozi ndị ọzọ niile. Weebụsaịtị ndị ha bipụtara doro anya, dị nkenke, ma nwee mmekọrịta na mgbanwe. Anyị na-enye ozi zuru oke maka ndị na-eduga na itinyekwu aka, mana ezughị ezu iji gbapụ ndị ọzọ nwere ike ịbụ ezigbo atụmanya.
Ọ bụ nlezianya anya. Nwere ike ịnye ọtụtụ ozi na ibe weebụ ma ka na-agbanwe ndị folks… mana m kwenyere na ibe kachasị mma zere ọtụtụ ndepụta atụmatụ na nkọwa. Kama nke ahụ, ha na-enye akaebe ndị ahịa, elele na nsonaazụ ndị ahịa. Zere ịdị mma, ọrụ na nka. Kama ilekwasị anya na ihe mgbu wetara onye ọbịa ahụ na otu ị si nyere ndị ọzọ aka belata ihe mgbu ha.
Tags: facebook nbanyeelekọta mmadụ ngwa mgbakwunyemmekọrịta mmadụ na ibe yaelekọta mmadụ signonnbanye twitter
5 Echiche ofgha nke Social Media
Nov 5, 2009 na 2:42 AM
Mgbe anyị megharịrị saịtị anyị, anyị belata ọnụ ọgụgụ peeji niile, ma wefee ọdịnaya gafere na blọọgụ anyị ebe ndị mmadụ nwere ike ịchọ ya ma ọ bụrụ n'ezie na ha chọrọ ya!
Fficzọ ahịa dị na peeji ndị dị mkpa abawanyela, yana ọnụọgụ ndebanye aha na blọọgụ anyị.
Nov 5, 2009 na 3:21 AM
Anọ m n'ahịa ogologo oge. Inye ọtụtụ ihe ọmụma n’otu oge ka ana-akpọ barfing na ndị ahịa. Nye ha ihe ga-ezuru ha ka ha laa.
Nov 5, 2009 na 11:54 AM
Ezigbo post Doug. Edere m akwụkwọ ọbịa banyere idebe weebụ dị mfe maka Liz Strauss. Akwa uche ihe myiri. Lelee ya: http://bit.ly/21dXf2
Mfe dị mma. Gaa ogologo na isi na weebụsaịtị gị.
Nov 5, 2009 na 7:31 PM
Akwụkwọ ndị ọbịa na Liz? Gị bu kpakpando kpakpando!
Nov 5, 2009 na 7:34 PM
Onye isi ahia m na-akpọ ya awụfu swiiti ahụ. Barfing nwere ike ịbụ ihe ziri ezi, agbanyeghị!